पलले बुझ्नु पर्दथ्यो ‘छोरीहरु प्रयोग गर्ने वस्तु होइनन्’ « Sansar News
१९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार १४:३४
यतिबेला नाबालिक गायिका समिक्षा अधिकारी र अभिनेता पल साहका कारण नेपालको कला क्षेत्र निकै विवादित बनेको छ । अभिनेता साह र गायिका अधिकारीबीच भएको खटपटका कारण अधिकारीले तनहुँ प्रहरीमा आफुमाथि साहले बलात्कार गरेको मुद्दा हालेकी छन् । सोहि अभियोगमा साह यतिबेला तनहुँ प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् ।
यतिबेला नेपाली समाज पनि दुई पक्षमा विभाजित भएको छ । केही समिक्षा त केही पलको पक्षमा बाँडिएका छन् । केहीले समिक्षालाई गाली गरिरहेका छन् भने केहीले परिपक्व उमेरका पल साहले बालिकाको जीवनमाथि यसरी खेलबाड गर्न नहुने बताइरहेका छन् । यद्यपी, कानुनले कानुनी पानामा टेकेर अन्यायमा परेकाहरुको न्यायसहित फैसला गर्नेछ भन्नेमा दुईमत छैन ।
हुन त चकलेटी अनुहारका नायक पलसाह नेपाली फिल्म क्षेत्रमा मात्र नभएर मोडलिङको क्षेत्रमा समेत आफ्नो स्थान निकै बलियो बनाएका नायक हुन् । संसारका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली तथा काठमाडौं सहरमा मात्र नभएर गाउका छोरीहरुका धुकधकीमा पनि पलसाहले आफ्नो स्थान बनाएका छन् ।
यो पंक्तिकारको पनि घरमा सानी ५ वर्षकी भदैनी छन् । पलसाहप्रति उनको क्रेज टिकटकका कारण बढेको हो भन्दा फरक पर्दैन । टिकटकमा चकलेटी अनुहारका पल साहलाई देख्दा उनमा पनि आकर्षण बढेछ । आफ्नी आमालाई पाल्पामै रहँदा उनले भनिछन्, “मलाई पल साह मन पर्छ म काठमाडौं गएर भेट्छु हैं ।” आमाले हुन्छ भनिछन् ।
लकडाउनका कारण काठमाडौंको पढाइ छोडेर पाल्पामै बसेर अनलाइनबाट क्लास लिएकी मेरी भदेनी फुर्सदको समयमा आमाको सहयोगमा भिडियो बनाएर टिकटकमा राख्ने गर्थिन् ।
कोरोना महामारी कम भएपछि उनी मंसिरको अन्तिममतिर बाबु–आमा र हजुरआमासँगै काठमाडौं आइन् । केहीदिनअघि उनी र म मोबाइल स्क्रोलर गर्दै हेर्दै थियौं । पल साह र समिक्षा अधिकारी अभिनित एउटा गीत आयो । त्यसमा समिक्षा र पल मुस्कुराएर अभिनय गरेका थिए । जो कोहीको पनि मन तान्छ उनीहरुको अभिनयले । गीत बज्दा बज्दै उनले समिक्षालाई देखाएर भनिन् ‘यो केटी नदेखाउनुस् पलको मात्र फोटो देखाउनुस ।’ किन ? भन्ने मेरो प्रश्नमा उनले भनिन–मलाई पल साह मात्रै मनपर्छ ।’ मैले उनलाई जिस्काउँदै भने–पल साह अहिले जेलमा छन् निस्किएपछि भेटौला है । भेटेपछि के भन्छ्यौ त भनेर सोधे, उनले भनिन्– मलाई पल साह मन पर्छ त ।’
उनलाई पल साहको चकलेटी अनुहार मनपर्छ । उनको अभिनय मनपर्छ । तर, पल को हुन्, के गर्छन् ? अनि पलसँग भेट्दा के हुन्छ ? के भन्ने भन्ने कुरा समेत उनलाई थाहाछैन । हो त्यस्तैमा परेकी हुन् समिक्षा अधिकारी पनि ।
गाउँले जीवन स्कुले अवस्था अनि उनको उमेरमा नेपाली चलचीत्र क्षेत्रका मनपर्ने नायक भनेकै पल साहका उमेरका नायकहरु हुन् । १४–१५ वर्षको उमेरका बालिकाहरुले सोच्ने नै यहि हो कि–सेतो घोडा चढेर राजकुमार आउँछ अनि मलाई घोँडामा चढाएर उसको आफ्नो संसारमा लैजान्छ ।’ त्यो संसार अनि त्यो राजकुमार उनीहरुको जीवनमा कहिल्यै आउँदैनन् । तर समिक्षाले भने हकिकतमै त्यस्तो राजकुमार पाएको अनुभव गरेकी थिइन् । उनले बुझेकी थिइनन् कि पल साहको स्टाटस के छ ? उनी कति उमेरका भए ? उनी के गर्छन ? कति कमाउँछन् ? उनको उठबस कस्तासँग छ ? पलले आफ्ना बारेमा के सोच्छन् भन्ने कुरा समिक्षा बिल्कुल अनभिज्ञ थिइन् ।
आम बालिकाले देखेको जस्तो सेतो घोडामा चढेर आउने राजकुमार थिए समिक्षाका लागि पल साह । तर, सपना र हकिकतमा धेरै फरक हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्ने उमेर समिक्षाको थिएन । त्यसैले त उनले पल साहलाई मन र भावनामा सजाउँदै सपनाको राजकुमार नै मान्न थालिन् । समय र परिस्थितिले पनि उनीहरु दुवैलाई सँगै का मगर्ने वातावरण बनाइदियो ।
यतिबेला पलका समर्थक र स्वयम् पलले पनि बुझ्नुपर्छ कि हो छोरीहरुको अस्तित्व होटलका कोठाहरुमा लगेर प्रयोग गर्नु गलत अनि कानुन विपरित हो । यदि उमेरका कारण उनीहरु बहकिए भने पनि आफू सम्हालिएर सम्भावित दुर्घटनबाट बच्नुपर्दछ् । त्यसमा पल चुकेका छन् । एउटा सिंगो मान्छे कुनै वस्तु होइन कि उसले जसरी चाह्यो त्यसरी प्रयोग गर्न सकोस् । त्यसमा पलले ध्यान दिनु पर्दथ्यो ।
पल साहको स्टाटस र मनसँग खेल्न सक्ने भावना र मनको विकास समिक्षामा भएको थिएन । यदि उनी २५ वर्षमाथिकी हुन्थिन् र परिवेश त्यस्तै पाउँथिन् भने पलसाहको जीवन सक्नका लागि उनी लागेकी हुन्थीन भन्नेमा दुई मत छैन । २५ वर्षमाथिकी एक युवतीले यो बुझ्न सक्छिन् कि पल साहजस्ता यो समाजका धेरै नायकहरुले आफ्नो जीवनमाथि खेलवाड गरे । जसका कारण उनले उ जुनसुकै स्टाटसको भएपनि उसको चुलिदो सफलता वा स्टाटस बर्वाद बनाउन लाग्छन् र त्यसका लागि त्यस्ता युवतीले अन्य पुरुषको सहारा लिएर अप्रिय घटना घटाउन पछि पर्दैनन् । त्यस्ता घटना हाम्रो समाजमा सार्वजनिक नभएका पनि होइनन् ।
सामाजिक संजालहरुमा समिक्षाले पलको चुलिँदो सफलतालाई देखेर उनलाई गिराउने पक्षमा लागेकी हुन् भन्ने कुराहरु पनि आएका छन् । त्यस्तो भन्नेले त्यहि उमेरका आफ्ना निर्दोष छोरीहरुलाई सोधौं उनीहरु चकलेटी अनुहारका पलसाह बारे के सोच्छन् ? तपाईले पाउनु हुनेछ उनीहरु पनि पल साहलाई असाध्यै मन पराउँछन् तर, मन पराउनुको कारण र मन पराएपछि के हुन्छ भन्ने कुराको आंकलन उनीहरुलाई हुँदैन । हो समिक्षा पनि त्यस्तै भएकी हुन् ।
सानै उमेरमा सांगितीक क्षेत्रमा उनको चुलिदो सफलता, साथमा मनग्य पैसा, सबैले मनपराउने नायकसँग कामका बेलामा भएको उठबस लगायतका कारण उनी साहप्रति आकर्षित हुँदै गइन् । अरुको खेतबारीमा काम गरेर कमाएको पैसाले राम्रा कपडा किनेर लगाउने अवस्थाकी समिक्षाले पल साहलाई मनमनै सजाएर उनीसँग बिहे गरेर पलकी बाबुआमाको बुहारी बनेर भित्रने रहर मनैदेखि राखेकी थिइन् । पललाई क्षणिक रुपमा प्रयोग गरेर देशदेखि विदेशसम्म बनेको पलको स्टाटसलाई भत्काइदिएर सडकमा पुर्याउछु भन्ने समिक्षाको सोच पक्कै थिएन् । उनी त निदोर्ष थिइन् परिणाम के हुन्छ भन्ने थाहा नपाई एकोहोरो पललाई माया गरिन् ।
भलै पलले उनलाई हेपेर, गाउँको केटी हो जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच नराखेको भएपनि झण्डै ३५ वर्षका परिपक्व उमेरका साहले समिक्षालाई उनको स्वास्थ्यका बारेमा केयर गर्नु, खाए नखाएको ख्याल गर्नु, लगाएको यो राम्रो र यो नराम्रो भनेर कमेन्ट गर्नु, कामका सिलसिलामा सँगै रहनु लगायतका व्यवहार गर्दा समिक्षाले साच्चै सोचिन् कि सेता घोडामा चढेर आउने राजकुमार पलसाह नै हुन् । त्यहिअनुसार उनले पल साहलाई मन दिँदै आइन् ।
यौवन अस्था पार गरेर युवा अवस्थामा पुगिसकेका पलले भने सोच्दै नसोचि उनाीमाथि यस्तो सपना देखाइदिए की समिक्षाका लागि मभन्दा माया गर्ने अर्को मान्छे नै कोही छैन । तर उनले सोचेनन् कि समिक्षा पनि कसैकी छोरी हुन्, कसैकी बहिनी हुन्, समाजकी चेली हुन् अनि बालिका पनि । त्यहिअनुसारको सम्मान र सद्भाव राख्नुपर्छ उनको जीवन नै विर्गाने व्यवहार गर्नुहुन्न भन्ने पलले सोच्न सक्नुपथ्र्यो । तर, पलले त्यतातिर ध्यान नदिएर समिक्षालाई जसरी प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हल्का सोचकै कारण आज उनी प्रहरी हिरासतमा बस्ने अवस्था आएको छ ।
यतिबेला पलका समर्थक र स्वयम् पलले पनि बुझ्नुपर्छ कि हो छोरीहरुको अस्तित्व होटलका कोठाहरुमा लगेर प्रयोग गर्नु गलत अनि कानुन विपरित हो । यदि उमेरका कारण उनीहरु बहकिए भने पनि आफू सम्हालिएर सम्भावित दुर्घटनबाट बच्नुपर्दछ । त्यसमा पल चुकेका छन् । एउटा सिंगो मान्छे कुनै वस्तु होइन कि उसले जसरी चाह्यो त्यसरी प्रयोग गर्न सकोस् । त्यसमा पलले ध्यान दिनु पर्दथ्यो ।
हो, समिक्षाका पनि धेरै उमेर अवस्थाका कारण धेरै कमजोरी होलान् । उनले परिवारको बलियो अभिभावमत्व पाइनन् । नेपाली सिने क्षेत्र तथा सांगीतिक क्षेत्रभित्रका संस्कृति र विकृतिबारे खुलेरै बुझाउने र बुझ्ने मौका उनले पाइनन् । उनैले भनेअनुसार यति सानै उमेरमा महिनामा ५ लाख कमाउने हैसियत बनाइसकेकी समिक्षालाई यो कदम गलत र यो कदम सही भनेर सम्झाउन सक्ने कोही भएनन् । गीत संगीतसँगै रमाएकी समिक्षाको उमेर माया र प्रेम गर्ने उमेर होइन त्यसमा उनी परिपक्व छैनन् भन्ने परिवारले बुझ्न सकेको भए आज यो घटना घट्ने थिएन । समिक्षाको दैनिकीमा परिवारले ध्यान दिन सकेको भए आज यो समाजका पलसाह जस्ता नायकबाट उनी बलात्कृत हुनुपर्ने थिएन् पीडित हुनुपर्ने थिएन् ।